U-Obama emlenzeni wokugcina kwesobuMengameli - Bayede News
Yize ehluleke wancama ukungayiphaki impi njengalabo abamendulele kukhona izethembiso azigcinile
SENGATHI bekuyizolo lapho insizwa ezalwa ngubaba waseKenya igila izimanga yenza umlando ezweni laseMelika. Wonke umuntu cishe kuwo wonke amagumbi amane omhlaba. Yaduma ngesiqubulo sayo esasithi: We can!
Lona kwakunguBarack Obama owadla umhlanganiso esikhundleni sokuba nguMengameli wama-44 waseMelika. Okwakwenza wonke umuntu abe magange wukuthi u-Obama wabe eqopha umlando. Wayezoba nguMengameli wokuqala waseMelika omnyama. Kubantu base-Afrika ukungena kuka-Obama kwazala ithemba lokuhle okwabe kuza. Kanti emazweni abe ekhungethwe yizimpi lapho iMelika yabe ingubhongoza khona, kwaba nethemba ukuthi izimpi lezo zizophela. Leli themba lalidalwa zinkulumo zakhe u-Obama ngesikhathi esakhankasa. Lapha wabe ethembisa , phakathi kokunye ukuthi yena (uma izakhamuzi zimvotela) ngeke afane nomengameli bangaphambili, ikakhulukazi uGeroge Bush owabe esolwa ngokuthi unguhlohlimpi.
Yize kwakukhona ingxenye eyabe ikungabaza lokhu (izethembiso) izakhamizi zamnika ithuba u-Obama lokuthi abe ngumengameli. Yize kulukhuni ukwahlulela ukuthi wenze kahle yini, okuyinto elukhuni manxa umengameli esesesihlaweni, kukhona akwenzile kule minyaka engumengameli. Okokuqala nje ukwazile ukubuyisa isithunzi sezwe lakhe esisusa kuleso sohlohlimpi ‘nephoyisa lomhlaba’ eliyisa ezweni elisebenza ngokubambisana namanye anazwe. Lokhu kufakazelwe yizinqumo abezeneka ezinhlakeni zamazwe lapho okokuqala ngqa iMelika ibonakale isebenza namanye amazwe ekutholeni izixazululo. Lokhu kwenzekile ngonyaka owedlule ezweni laseFrance lapho iMelika namanye amazwe ibe nesivumelwano esibe yinqabakutholwa ngezindaba ezithinta ukuguquguquka kwesimo sezulu. Lokhu ongoti bakholwa wukuthi kungenxa yenqubomgobo kahulumeni wakhe u-Obama. Into abathi ibingenzeke ngezikhathi zikaMengameli uGeorge Bush noma uyise uGeorge W. Bush.
Le nqubomngomo kukholakala ukuthi yiyo eyenze kwaba nokusebenzisana kweMelika kanye namazwe afana ne-Iran kanye neCuba, okuyinto engakaze iphushwe muntu. Namuhla iMelika ingokunye emazweni omhlaba iyilokhu u-Obama enkulumweni yakhe yokugcina ezindlini zePhalamende athe isikhathi sakhe sokuba ngumengameli besizama ukukweza, ukususa ‘isithombe sokuthi iMelika iyiphoyisa lomhlaba’. Nokho umlando yiwo ozomehlulela ukuthi uphumelele yini kulokho.
Kubantu abaningi u-Obama ubengumuntu othambile nje. Lokhu kwakwenziwa phakathi kokunye wukuthi akakaze abe nomlando wezempi okuyinto amaMelikana ayihloniphayo. Nokho emlandweni waleliya zwe kube nguye u-Obama othole impunga yehlathi, unogwaja ozikhundlakhundla uMnu Bin Ladin owabe esolwa yiMelika ngesehlakalo sango 11 kuMandulo ngowe-2001, lapho kwabhubha khona abantu abaningi. Nguye u-Obama owalikhipha lagcwala elokuthi ‘simtholile’ esho khona ukuthi iMelika isize yamthola unogwaja ozikhundla khudla.
Kagcinanga lapho ngoba yize abe ethembise ukuthi angeke ayiphake impi namuhla elaseMelika lingubhongoza empini yase Syria. Lapha oka-Obama ucasha ngesithupha ngoba umi kwelokuthi ‘angeke awaphake amagumgedlela’ kepha kukhona abathi asekhona vele. Izimpi zik-Obama zifaka elaseAfghanistan, Iraq, Pakistan, Somalia, Yemen, Libya neSyria. Kwelase Libya wenza okufanayo ukucasha ngesithupha .
Yize ayethe ngeke athumele amagumgedlela , kunobufakazi obuqandula ikhanda ukuthi elaseMelika lalekelela amavukelambuso ukuqumba phansi lowo owayengumholi waleliya zwe uMoammar Gadhafi ngonyaka wezi-2011. Lapha ngokubambisana namaNgisi (umkhumbi wezempi) bathumela amabhomu alinganiselwa e-100 ukubhidliza isizinda sezempi saleliya zwe. Lokhu kwenza ukuba lo mholi angehluki kuMengameli uBush. Empeleni u-Obama ubukeka eze wedlulela umehluko nje wukuthi yena uyiphaka ngendlela eyahlukile. Akuyona imfihlo ukuthi ngesakhe isikhathi ziyatholakala izinhloli namasosha akhe ezindaweni ezithile ezinezimpi.
Kuleli sonto lo Mengamli we-44 ubethula inkulumo yakhe yokugcina (State of the Union) sekusele kubantu bakuleliya zwe kanye nomlando ukuthi wehlulele ukuthi engabe wenze kanjani.
Loludaba lwashicilelwa: 14-21 kuMasingana 2016
nguMfo waKwaNomajalimane Apr 12, 2016